राजा महेन्द्रका पक्षमा
आज १ पुस, अर्थात् तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन ।
हरेक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता पक्षधर नेपाली नागरिकले मान्ने, ‘कालो दिन ।’
१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेर बीपीसहित तत्कालीन नेताहरूलाई पक्राउ गरे । यसपछि कति जेल परे भने कति निर्वासित भए ।
यसपछिका ३० वर्ष नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबा रह्यो । यसबीचमा कतिले ज्यान गुमाए, कति जेलमा सडिए, कति निर्वासनमा जान बाध्य पारिए । यति मात्र होइन, लेखक र पत्रकार, जो स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्थे, तिनीहरू पनि निर्दलीय पञ्चायतको दमन र उत्पीडनको सिकार बने ।
देशमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन भइरहे प्रजातन्त्रका लागि । उता, पञ्चायतले त्यसलाई अनेक तरहले दबाउने प्रयत्न गरिरह्यो र ३० वर्षसम्म आफ्नो दबदबा कायम राख्यो ।
राजा महेन्द्रमा शासकीय महत्त्वाकांक्षा हुनु अन्यथा हुँदै होइन ।
सन्दर्भ पञ्चायती व्यवस्थाको होइन, राजा महेन्द्रको मात्र । यस आलेखमा व्यक्ति वा तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रका देश विकासका काम र दूरदर्शिताका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजा महेन्द्रबारे नेपाली जनमानसमा औठो छाप बनेको छ । महेन्द्रलाई राष्ट्रघाती, देशद्रोही, विकासविरोधी र जनघातीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । तर, उनका बारेमा सही सत्य र तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने जमर्को कमैले गरे ।
हाम्रो मानसिकता यो बनाइयो कि राजा भन्नेवित्तिकै खराब तत्त्व हो । राजा सधैँ निरंकुशता, अन्याय, दमन, विकासविरोधीको पर्याय हो । राजाभन्दा राजनीतिक दलका नेता असल हुन् । नेता मात्र विकासवादी र राष्ट्रवादी हुन् ।
तर, यसो मात्र होइन । शासक जोसुकै होस्, उसको चरित्र र विशेषता निरंकुश नै हुन्छ । देखाउनका लागि जतिसुकै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संविधान, कानुन, ऐन र नीति बनाइए पनि त्यहाँ पनि निरंकुशताको अंश लुकेको हुन्छ । आफ्नो र आफ्नो सत्ताको हितविरुद्ध कुनै पनि सरकार र नेतृत्व जान चाहँदैन ।
बहुदलीय व्यवस्था वा प्रजातान्त्रिक अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नै पनि जतिसुकै ‘लोकतान्त्रिक’ कानुन बनाइए पनि शासकको नियत जनतामाथि शासन गर्ने नै हुन्छ । आफ्नो हित रक्षा गर्ने नै हुन्छ ।
यसर्थ, राजा महेन्द्रमा शासकीय महत्त्वाकांक्षा हुनु अन्यथा हुँदै होइन । त्यसमाथि दुई तिहाईको सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसारका काम कारबाही हुन नसकिरहेको अवसर पारेर आफ्नो शासकीय अहं लाद्नुलाई पनि अन्यथा मान्नु जरुरी छैन ।
तथापि, राजा महेन्द्रको तत्कालीन महत्त्वाकांक्षाका कारण ‘प्रजातान्त्रिक’ दलहरू र नेतृत्वमा चोट पुग्नु, उनीहरूको अहंमा ठेस लाग्नु पनि स्वाभाविक हो ।
प्रश्न उठ्छ, ‘निरंकुशताको पक्षपोषण गर्ने ?’
स्वाभाविक हो प्रश्न । तर, त्यही निरंकुश भनिएका शासकले प्रजातान्त्रिक भनिएका शासक (तत्कालीन राजनीतिक दल र उसको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार)बाट सत्ता खोसेर उसले भन्दा राम्रा र सही काम गर्छ, गरेको छ भने त्यसमा यस्ता प्रश्नको माने नै रहँदैन ।
यथार्थ के हो भने, जुनसुकै व्यक्तिको वा समूह र दलको सत्ता होस्, उसले राम्रो काम गर्नुपर्छ । जनहित र देशहितका काम गर्नुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका काम गर्नुपर्छ ।
बस्, जनतालाई भैँसीले पाडो पायो कि पाडीसँग होइन, विगौतीसँग हो सरोकार । वा, सरकारमा को गयो वा जान्छ होइन, उसले के गर्‍यो वा गर्छचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जनताका लागि ।
यस अर्थमा तत्कालीन राजा महेन्द्र नेपाली नेताहरूमा बढी दूरदर्शी, देशप्रेमी र विकासवादी नेता हुन् भन्ने केही आधार छन् ।
विश्वमा केही यस्ता नेता जन्मिएका छन्, जसलाई ती देशले मात्र होइन, संसारले नै सदा सम्झिरहेको छ । जर्मनीका एकीकरणकर्ता बिस्मार्क, केन्याका राजनेता जोमो केन्याता, चीन एकीकरण गर्ने सम्राट ह्वाङ्ती, अमेरिकी राजनेता जर्ज वासिङ्टन र अब्राहम लिङ्कन, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला र नेपालका राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह आदि यस्ता सम्झिइने नेतामा पर्छन् ।
यी उल्लिखित नेतासँगै नेपालले सम्झिनुपर्ने नेता हुन्, राजा महेन्द्र ।
राजा महेन्द्रका स्मरणयोग्य काम
राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र चतुर थिए, त्यति नै देश विकास र जनहितप्रति अनि राष्ट्रियताका सवालमा संवेदनशील पनि थिए । यसको पुष्टि उनका कामबाट हुन्छ ।
राजा महेन्द्रले त्यस समयमा विभिन्न देशको भ्रमण गर्दै ती देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । यो नेपालको हितमा थियो । यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नुमा उनको उल्लेख्य भूमिका थियो ।
उनले दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्धलाई जोड दिए । नेपालमा सहयोगमा भारत र चीनको मात्र होइन, रुस, अमेरिका र अन्य देशको पनि वैदेशिक सहयोगलाई स्वागत गरे, जसका कारण नेपालमा विकासका क्षेत्रमा धेरै पक्षबाट सहयोग जुट्न थाल्यो ।
२०२४ सालमा अरनिको राजमार्ग नबनेको भए नेपाल र चीन सडकले कहिले जोडिन्थ्यो होला ?
महेन्द्रले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै पहिचान दिने उद्देश्यका साथ नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था सुरु गरे ।
देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत अवस्था बुझ्न महेन्द्र आफैँ मेची–महाकाली पैदल भ्रमण गरेर ग्रामीण वस्ती र कुना कन्दरामा बस्ने लाखौँ नेपालीको सुखदुःख बुझ्ने प्रयास गरे ।
नेपाल–भारत सिमानामा भारतबाट आएर चोरी–डकैतीलगायतका अपराध गर्ने क्रम बढेपछि महेन्द्रले भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जमिन दिएर मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न भागमा बसोवास गराए । तराई–मधेसमा बसोवासलाई प्रोत्साहन गरे ।
राजा महेन्द्रले मेची–महाकाली जोड्ने १०२७.६७ किलोमिटर लामो महेन्द्र राजमार्ग बनाउने निर्णय नगरेका भए आज पनि नेपालभित्रै यात्रा गर्न भारतको बाटो भएर कष्टकर तवरले हिँड्नुपर्ने थियो कि ?
भारतलाई आग्रह गरेर महेन्द्रले वीरगञ्ज नजिक सिर्सियाबाट हेटौँडा–सिमभञ्ज्याङ–थानकोटसम्म १५९.६६ किलोमिटर त्रिभुवन राजपथ अर्थात् ‘बाइरोड’ नबनाएका भए राजधानी काठमाडौं आउन यति सहज हुने थिएन राजधानीबाहिरबाट ।
महेन्द्रकै पालामा सुरु भएको हो काठमाडौं–पोखरा जोड्ने सडक । उक्त पृथ्वीराजमार्ग चीनको सहयोगमा बन्यो । सातदोबाटोबाट हेटौँडा पुग्ने ९० किलोमिटर लामो कन्ति राजपथ पनि राजा महेन्द्रकै सोचको उपज थियो ।
यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रिय सुुरक्षालगायतका हरेक क्षेत्रमा राजा महेन्द्रका काम हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रलाई ‘अराष्ट्रवादी’, ‘विकासविरोधी’ भन्नुको तुक देखिँदैन ।
जसले देश र जनताका लागि दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने कामहरू गर्‍यो, विकेन्द्रीकरणको सबल र सफल अभ्यास सुरु गर्‍यो, विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको स्वदेशमै स्थापना गरेर परनिर्भरताबाट मुक्त बनाउने प्रयास गर्‍यो, ऊ कसरी विकासविरोधी, अराष्ट्रवादी हुन्छ ?
अमेरिका, सोभियतसंघ, चीन, भारत जस्ता राष्ट्रलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नु महेन्द्रको चातुर्य, कूटनीतिक सफलता होइन भन्ने आधार के ?
भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँदै ५३ देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भएका महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी मान्ने कारण अनेक छन् ।
भारतीय सेनालाई दक्षिणी र उत्तरी सीमाहरूबाट हटाउन, नेपालमा भारुको प्रचलन बन्द गर्न, भारतको विरोध हुँदाहुँदै पनि कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको नाका खोल्न, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थित हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न उनले गरेको निर्णय र उनले देखाएको सक्रियता के अराष्ट्रवादी थियो ?
यसरी हेर्ने हो भने बरु अहिलेका गणतान्त्रिक भनिएका, बढी राष्ट्रवादको फुइँ लगाउनेहरूमा महेन्द्रको जतिको बृहत् सोच र स्वाभिमानी अडान नभएको देखिन्छ ।
अहिले कोही भारतलाई अभिभावक मान्ने त कोही चीनलाई निर्देशक मान्ने राजनीतिक दल र नेता छन् । स्वविवेकको निर्णय गर्न र चुनौतीपूर्ण कामहरू गर्न उनीहरू डराउँछन् । उनीहरूलाई सत्ता गुम्ला कि, फेरि सत्तामा पुगेपछि भारत वा चीनको पर्याप्त आशीर्वाद र सहयोग नपाइएला कि भन्ने त्रास छ ।
विगत दशकौँदेखि अहिलेका मसिहा राजनीतिक दलहरूले हरेकजसो निर्वाचनका समयमा आश्वासन बाँड्दै आएको भूमिसुधार आजका मितिसम्म लागू गर्न सकेका छैनन् तर राजा महेन्द्रले २०२१ सालमै भूमिसुधार लागू गर्नु चानचुने कुरा हो र ?
उनले जमिनदारका लाखौँ विगाह अनुत्पादक जमिन खोसेर हजारौँ भूमिहीन किसानलाई वितरण गरे । पहिलो पल्ट झापाका नौ जना भूमिहीन किसानले २०२१ सालमा मोहियानी हक पाएका थिए । यो क्रान्तिकारिता वा विकासको आधार हो कि प्रतिगमनकारी वा जनविरोधी वा देशघाती ?
वर्गीय, जातीय र वर्णका आधारमा नेपाली समाज लामो समयदेखि पीडित छ । यस्तो अवस्थामा छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय बनाउने महेन्द्र अराष्ट्रवादी हुन् ?
मुलुकको विकास र समृद्धिलाई योजनाबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गर्ने मेहन्द्र के विकासविरोधी नै हुन् त ?
केन्द्रिकृत विकास नीतिलाई विकेन्द्रिकृत गर्न मुलुकलाई राजनीतिक विभाजन गरेर ५ विकासक्षेत्र, १४ अञ्चल अनि ७५ जिल्लामा विभाजन गर्ने राजा महेन्द्रलाई विकासविरोधी मान्ने हो भने विकासका लागि भन्दै जातीय र क्षेत्रीय आधारमा मुलुकको विभाजन गर्ने वा प्रदेशका नाममा सात टुक्रामा देशलाई बाँड्नेहरूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी मानूँ ?
यसरी नै महेन्द्रकै शासनकालमा सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, त्रिशूली र पनौती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न महेन्द्रले कदम चाले । नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे ।
राम्रा काम वा योजना जसले बनाए पनि वा जसले अघि सारे पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सोच महेन्द्रको सकारात्मक सोच किन नमान्ने ?
यति मात्र होइन, राजा त्रिभुवनका नाममा स्थापित नेपालको प्रमुख प्राज्ञिक निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि महेन्द्रका मुमाहरू कान्ति र ईश्वरीले आफ्ना गहना बेचेर सोह्र लाख रुपैयाँ जुटाइदिएका थिए, जुन महेन्द्रकै आग्रहमा भएको थियो । यसबाट महेन्द्र शिक्षाको विकासमा कति संवेदनशील रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
महेन्द्र आफैँमा सिर्जनशील व्यक्ति थिए । कला, साहित्य र संगीतका क्षेत्रमा उनको अगाध रुचि थियो । यसैको परिणाम उनले कलाकार, साहित्यकार, संगीतकारलाई समेट्न र कला, साहित्य र संगीतको विकास, विस्तार गर्न नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठान स्थापना गरेर विद्वान् विदूषीलाई सक्रिय गराए ।
महेन्द्रकै शासनकालमा नेपाली चलचित्र निर्माण गर्न शाही नेपाली चलचित्र संस्थान स्थापना भयो ।
सपना बीपीले देखाए, पूरा महेन्द्रले गरे
खासमा राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा उल्लिखित जति पनि कामहरू गरे, ती कामहरूको योजना वा खाका बीपी कोइरालाले कोरेका थिए भनिन्छ ।
बीपीका समाजवादी योजना र देश विकासका दूरगामी महत्त्वका योजनालाई महेन्द्रले बेवास्ता नगर्नु नै उनको महानता पनि त हो ।
जस्तोः केही उद्योग, कलकारखाना स्थापनाको योजना, भूमिसुधार योजना, विकेन्द्रीकरणको योजना आदि बीपीका योजना भएको जानकार बताउँछन् । तर, बीपीले महेन्द्रकै कारण आफ्ना ती योजना पूरा गर्न पाएनन् । यद्यपि, महेन्द्र आफैँले उक्त योजना कार्यान्वयन गरिदिएर बीपीको सपना पूरा गरिदिए ।
यस अर्थमा पनि महेन्द्र गलत शासक थिएनन् भन्ने आधार देखिन्छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, थुप्रै सिँचाइ योजना र उद्योगधन्दाको जग विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाकै शासनकाल बसालिएका हुन् । कोदारी राजमार्ग पनि टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाको सफल चीन नीतिकै फल हो भन्नेहरू पनि छन् ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकास, शान्ति, एकता र राष्ट्रको अस्तित्व रक्षाका लागि राजा महेन्द्रले गरेका कामको थोरै मात्र काम गर्न आजका नेतृत्व उत्साहित भए भने त्यही काफी हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १, २०७६, १६:५३:००